कति छ ब्रम्हानन्दनको सम्पत्ति ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कति छ ब्रम्हानन्दनको सम्पत्ति ?
दक्षिण भारतीय फिल्मका ‘कमेडी किंग’ भनेर चिनिन्छन् ब्रम्हानन्दन । उनको अभिनयका फ्यान करोडौं छन् । दक्षिण भारतमा बन्ने अधिकांश फिल्महरुमा नछुट्ने ब्रम्हानन्दनले ३० बर्ष लामो फिल्म करिअरमा हजारभन्दा बढी सिनेमा खेल्दै विश्व रेकर्डमा समेत आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन् ।
उनको नाम गिनिज बुकमा एकै भाषामा बनेको सातसय भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गर्नेको नाममा दर्ता छ । सन् १९५६, फ्रेवअरी १ मा जन्मिएका ब्रम्हानन्दन फिल्ममा आउनुअघि लेक्चरर थिए । क्याम्पस पढाउँदा विद्यार्थीमाझ उनले गर्ने विभिन्न एक्टिंग चारकुनामा मात्र सिमित रहेन ।
क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा उनलाई ‘तेलुगु’ भाषाका एक निर्माताले फिल्मको अफर गरे । पहिलो डेब्यू फिल्ममा उनले गरेको अभिनय निर्मातालाई खुबै मन पर्‍यो र उनले दोस्रो फिल्ममा पनि ब्रम्हानन्दनलाई दोहोर्याए । त्यसपछि त उनले करिअर पछाडी फर्किएर हेर्नु नै परेन ।
टुंगियो नागा र समान्थाको वैवाहिक सम्बन्ध
केही समयदेखि मिडियामा साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य र उनकी श्रीमती तथा साउथ अभिनेत्री समान्था अक्किनैनीबीच
महेश बाबुसँग रोमान्स गर्दै कीर्ति
दक्षिण भारतीय चलचित्रका चर्चित अभिनेता महेश बाबुको नयाँ चलचित्र ‘सरकारी भारु पट्टा’ मा अभिनेत्री कियरा
परमिताले तेलुगू चलचित्र गर्दै, हिरो गोपीचन्द
चलचित्र ‘चपली हाइट २’ मा बोल्ड सिन दिएर चर्चामा आएकी अभिनेत्री परमिता आरएल राणाले पहिलो
२ सय करोडको दौडमा ‘केजीएफ’
साउथको चलचित्र ‘केजीएफ’ आफ्नो परफर्मेन्सले सबैलाई चकित बनाउँदै देखिएको छ । यो चलचित्रले केवल रेकर्ड